Sawirro-M Farmaajo oo qaaday tallaabo aysan ku farxin ciidanka iyo shacabku ilaaladiisana kadhigtay AMISOM. – Puntland News.net
Home 2017 February 11 Somali News Sawirro-M Farmaajo oo qaaday tallaabo aysan ku farxin ciidanka iyo shacabku ilaaladiisana kadhigtay AMISOM.
Sawirro-M Farmaajo oo qaaday tallaabo aysan ku farxin ciidanka iyo shacabku ilaaladiisana kadhigtay AMISOM.
February 11, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
Ciidamada AMISOM ee ka howlgala madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku biiray ilaalada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo kadib xamaasad iyo diidmo hareysay habeenkii la doortay.
Arrintan ayaa ka danbeysay kulan dhex maray AMISOM iyo madaxweynaha cusub iyadoo waajibaadka AMISOM (Mandate) ay ka mid yihiin ilaalada madaxda sare ee dalka, waxaan la isku afgartay in ciimada AMISOM ka mid noqdaan ilaalada Madaxweynaha.
Ciidamo xul ah oo ka tirsan kuwa Milateriga ayaa qeyb ka noqon doona sidoo kale ilaalada madaxweyne Farmaajo oo lagu wado in toddobaadkan dhexdiisa la caleemo saaro, si rasmi ahna uu xilka ula wareego.
Habeenkii doorashada iyo maalintii ka danbeysay ee Khamiista 9-ka Febraayo ayaa madaxweyne Farmaajo iyo gacanyareyaashiisa ay dalbadeen ciidamo ka tirsan kumaandooska Soomaalida inay ilaalo u noqdaan, taasoo ay dhalisay xamaasadii ka dhalatay doorashada.
One thought on “Sawirro-M Farmaajo oo qaaday tallaabo aysan ku farxin ciidanka iyo shacabku ilaaladiisana kadhigtay AMISOM.”
Nuh February 15, 2017 at 2:26 pm · Edit
Mudane mudada aad dhimaneyso Rabiga Koonkaan iska-leh wuu kuu qiyaasay, saacad laguugu dari mayo saacadna lagaa dibdhigi mayo”waxaanse ku oran lahaa wax kuu dhaamaa ma jirto in uu ku ilaaliyi walaalkaa Somaali ah, taas ayeyna ku jirtaa kalsoonida inagana qalbigeena isu soo dumi karta”Allah haku xafido